UGarmin Vivofit Jr 2 uyisongo lokulinganisa labancane | Izindaba zamagajethi
Akukephuzi kakhulu, noma kusenesikhathi kuleli cala. Namuhla sizokhuluma ngomkhiqizo oyingqayizivele owethulwe nguchwepheshe wochwepheshe uGarmin, isongo elilinganisiwe elenzelwe futhi lincipha kakhulu kwendlu ngayinye. Iqiniso ukuthi asicacisanga ukuthi iyiphi i-niche yabasebenzisi baleyo minyaka engafuna ukulinganisa ukungaguquguquki kwabo nokusebenza kwabo ngokomzimba, kepha kungumkhiqizo ongathandeki kangako.
Ukugqamisa i- amabhande anezinhlamvu ze-Disney, UGarmin uhlose ukukhuluma nezithameli ukuthi umhlaba wezobuchwepheshe awuvamisile ukubheka kakhulu, abancane. Ake sibheke izici zayo nokusebenza kwayo.
Lesi songo esisha sizoba nemichilo nazo zonke izinhlamvu zeDisney ezinjengeMinnie Mouse, Star Wars (kufaka phakathi i-BB-8) kanye neCaptain America. Lesi songo senzelwe ukukhumbuza abancane ukuthi kufanele bathole okungenani imizuzu engamashumi ayisithupha yokusebenza komzimba nsuku zonke ukukhula ngempilo ebafanele, futhi yini okungaphansi kokusebenzisana neDisney, inkampani ejabulise izingane eziningi ezikhathini zamuva.
Isongo linesikrini esincane lapho singabona khona izinyathelo abazithathile kanye nobuso bezinhlamvu. Ibhethri lalo kufanele liqinisekise ukusetshenziswa okubalulekile, yize namanje singayiphathi imininingwane ngqo (sikhuluma kuze kufike ezinsukwini ezi-5). Izingane zizothola "umklomelo" lapho ziqede imizuzu yazo engamashumi ayisithupha yokusebenza kwansuku zonke ngokuvula impumelelo, kanye nezinye izinselelo ezintsha nohlelo lokuvumelanisa namasongo wabangane bethu. Lesi songo sizokwethulwa eYurophu emasontweni azayo kusuka ku- € 100, ngezindleko zenye i- € 30 ngentambo ngayinye engashintsheka. Indlela ethokozisayo yokusebenzisa okugqokekayo kokuncane kunakho konke kwekhaya ngaphandle kokungabaza.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » SmartWatch » UGarmin Vivofit Jr 2 uyisongo lokulinganisa labancane